Tag: id ny mpandefa | Martech Zone
Tag: id ny mpandefa
ActiveTrail: Sehatra fivarotana mailaka mora ampiasaina sy marketing automatique
Zoma, Desambra 29, 2017 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Douglas Karr
Miaraka amin'ireo sampana any Etazonia, Israel, Alemana, France ary Amerika Latina, ny ActiveTrail dia manampy ireo orinasa amin'ny endriny sy habe rehetra, manerana an'izao tontolo izao, hikolokolo ny fifandraisana amin'ireo mpanjifany. Hatramin'ny nanombohany tetikasa iray anatiny, ny orinasa dia nanjary mpamatsy serivisy mailaka marobe, manome sehatra marketing efa mandroso. Ny fiasa ActiveTrail Email Marketing Platform dia misy ny Marketing amin'ny mailaka - Miorena mora foana amin'ny fampielezana mailaka amin'ny fampielezana mailaka. Fitaovana goavambe izy ireo dia misy fikafika, fitantanana fifandraisana, mpamoaka sary, tsingerintaona nahaterahana
Fahadisoana 5 mety hahazo ny mailakao amin'ny solosaina Spam
Alahady, May 3, 2015 Alahady, May 3, 2015 Douglas Karr
Raha misy ampahany amin'ny asako izay manohy mahatonga ahy hanapoka ny lohako amin'ny rindrina, dia ny fandefasana mailaka. Manohy mampitombo ny lisitry ny mpamandrika mailaka izahay, saingy mampihomehy ireo ISP. Ao amin'ny orinasa, zavatra iray mitranga ny fivadihan'ny mailaka rehefa mandeha sy mivoaka ny mpiasa. Hanana mpifanerasera tsy tapaka izahay mandritra ny volana maro ary avy eo - poof - ny mailaka. Na ny ratsy kokoa aza, dia alefa amin'ny olon-kafa izy ireo
Mail Tester: fitaovana maimaim-poana hanamarinana ny mailakao amin'ny mailaka hanohitra ny olan'ny SPAM mahazatra
Talata, Jolay 8, 2014 Douglas Karr
Izahay dia nanara-maso ny isan-jaton'ny boaty mailaka ampiasainay miaraka amin'ny mpiara-miasa aminay 250ok ary nahazo vokatra tsara. Te handalina lalina kokoa ny tena fananganana mailaka nataoko aho ary nahita fitaovana tsara antsoina hoe tester mail. Mail tester dia manome anao adiresy mailaka tokana ahafahanao mandefa ny mailanao ary avy eo dia manome anao fandinihana haingana ny mailakao izy manohitra ny fanamarinana SPAM mahazatra amin'ny sivana junk. The